Imaam Maalik Ibnu Anas | U adeeg Xadiith-ka Rasuulka
Imaam Maalik Bin Anas (امام دار الهجرة) Bismilaah
Nasabkiisa iyo dhalashadiisa
Magaciisa: Abuu Cabdullaah Maalik bin Anas bin Maalik bin abii Caamir bin Camr bin Xaarith Al-asbaxi. Wuxuu ka soo jeedaa Imaamku asal ahaan “Ximyar” oo ah qabiil Yemen dega . Hooyadiisna waxaa la yiraahdaa Caaliyah bintu Shariik bin Cabdiraxmaan Alazadiyah. Imaamku wuxuu dhashay sanadkii 93H, wuxuuna ku dhashay Madiinah AlMunawarah oo ah magaaladii Rasuulku swc u hijrooday oo ayna ku kulmeen jiilkii ugu horeeyay ee saxaabada iyo ardaydoodii. Allah ka raali noqdee wuxuu ku barbaaray deegaan cilmiyeed. Aabihii , walalkiis iyo hooyadiisba waxay ahaayeen dad cilmiga xadiithka aad u raac raaca taasna raad bay ku yeelatay imaamka .
Dadaalkiisii cilmi raadinta
Imaamku wuxuu bilaabay cilmiga isagoo aad u yar wuxuu sida caadada u ahayd culimada xifidyay Qur’aanka. Wuxuu bilaabay imaamku inuu la fariisto culimadii waqtigiisa joogtay Macalimiintiisii kuwii ugu horeeyay waxaa ka mid ahaa Ibnu Hurmuz, wuxuuna ka bararnayay cilimiga 7sano cid kalena uma tagi jirin xiligaa. Isagoo ka waramaya imaamku wuxuu yiri “waxaan u imaan jiray Ibnu Hurmaz subaxii kamana tagi jirin ilaa habeenkii”. Kadib wuxuu u wareegay Naafic Mowlaa ibnu Cumar ilaa uu la caan noqday riwaayadkiisa (warintiisa ) مالك عن نافع عن ابن عمر . Wuxuu kaloo ka qaatay imaamku cilmiga Ibnu shihaab Azuhhari iyo culimo kaloo badan
Wuxuu imaamku ku bixiyay cilmiga dadaal iyo waqti badan. Magaalada Madiina casrigiisii ma jirin cid lala simo xagga cilmul xadiiska, Fiqhiga iyo xifdigaba.
Isagoo ka waramaya imamku naftiisa wuxuu yiri “waxaan u imaan jiray Naafic Mowlaa ibnu cumar maalinta badhkeeda iyadoo geedna iga celinayn qorraxda waxaan sugi jiray intuu ka soo baxayo markuu soo baxo xoogaa baan u kaadin jiray waxaan iska dhigi jiray sidii anoon arkayn kadibna waan salaami jiray markaasaan waydiin jiray waxaanan oran jiray muxuu ka yiri Ibnu cumar sidaa iyo sidaa kadibna wuu ii jawaabi jiray waana xifdin jiray wuxuu ii sheegoo dhan”. Mar kale isagoo ka waramamaya xifdigiisa wuxuu yiri . Waxaan u imid mar Ibnu shihaab Azuhhari, markaasuu i waydiiiyay waxa aan doonayo .Markaasaan ku iri waxaan rabaa inaad xadiith ii sheegto, ka dib wuxuu igu yiri la soo bax looxaaga waan la soo baxay wuxuu ii sheegay 40 xadiith markaasaan ku iri ii kordhi markaasuu igi yiri U kaadi hadaad xafido intaan oo xadiith waxaad ka mid tahay Xufaada, markaasaan ku iri waan xafidayba markaasuu iga qaaday looxii gacantayda ku jiray oo yiri ka soo bax markaan soo sheegay intii xadiith ahayd ee uu ii sheegay wuxuu yiri Kac waxaad tahay weelasha cilmigee !
Imaamku wuxuu ku caan baxay xifdi sareyn, waxaa la sheegaa inuu ka dhagaysan jiray xadiithka culimo badan mid walbana ka maqli jiray 50 ama 100 xadiith korkana ka xifdin jiray isagoon xadiithna ku qaldin xadiithka kale
Naafic (mawlaa Ibnu Cumar)
Ibnu Shihaab A zuhuri
Yaxye ibnu Saciid al Ansari
Imaam Jacfar A-saadiq
Cabdullahi ibnu Diinaar
Caisha bintu Sacad binu abii waqqaas iyo Culimo kale oo fara badan. Hadaladiisii qaar
Ibnu Cabdul Barr wuxuu ka wariyay imam Maalik inuu yiri “Cilmigaan yacni (xadiithka) waa diin ee ka fiirsada cidaad ka qaadanaysaan diintiina”. Wuxuu kaloo oranjiray imaamku “lagama qaato cilmiga 4 ruux. balse waxii ka sokeeya waa laga qaadan karaa. Afartaasna waxay kala yihiin: 1) Qof safiih ah (doqon) . 2) Qof bidcoole ah dadkana ugu yeeraya bidcadiisa . 3) Qof beenaale ah . 4) Mid sheekh ah oo fadhli iyo wanaagba leh oo hadana aan garanyn waxan uu xanbaarsanyahay waxuu ka waramayo/ka hadlayo.
Ardaydiisii/dadkii xadiiska ka weriyay:
Imaam Maalik dad aad u fara weyn ayaa ka weriyay axadiista. Imam Dhahabi waxuu yidhi ” Imaam Maalik dad aad u badan oon lasoo koobi karin ayaa wax ka weriyey”. Khadiibul Baqdaadi waxuu ka alifay kitaab uu ku qoray dadkii Imam Maalik ka weriyay axadiista waxuuna ku sheegay qiyaastii ilaa 993 qof.
Kuwa ugu caansan waxaa kamid ah:
Wakiic ibnu Jarraax
Sufyaan Ibnu Cuyeyna
Shucbah ibnu Xajaaj
Cabdullahi Ibnu Mubaarak
Cabduraxmaan ibnu Mahdi
Layth ibnu Sacad
Sidoo kale sheekhiisii Zuhuri ayaa isaga ka weriyay axadiis.
Raacistiisi Sunnada iyo Nacaybkisii Bidcada
Wuxuu aad caan ugu ahaa imaamku ku dheganaanta sunnada iyo wadaddii saxaabada wuxuuna aad u necbaa bidcada iyo waxyalaha diinta lagu soo daro. Imaam Shaadibi wuxu ku sheegay kitaabkiisa (Alictisaam) inuu Imaam Maalik yidhi “qofkii Islaamka ku soo dara waxaan ka mid ahayn oo bidco ah, bidcadaas oo uu u arko wanaag waa qof sheegtay in Nebi Muxammad scw khiyaanay Risaaladii uu Ilaahay usoo dhiibay. Sababtoo ah Ilaahay ayaaba yidhi ” الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً Wuxuu aad uga soo horjeeday imaamku ahlu bidaca iyo kuwa hawadooda raaca.
Nin ayaa maalin weydiiyay imaamka aayada Qur’aanka ah ee ah الرحمن على العرش استوى , waxuuna yidhi sidee ayuu Ilaahay carshiga ugu istiwooday/sugnaaday?. Imaamku xoogaa ayuu ka amusan kadibna waxuu yidhi : ” Alistiwaa (kelmadaas) waa la yaqaanaa waxay tahay. Sidee ayuu ugu sugnaaday carshigiisana lama oga. In la is weydiiyana waa bidco. In la rumeeyana waa waajib”. Sidaasuu kusoo koobayba hadalkii dhanaa.
Amaantii culimada ay ka yiraahdeen Imaam Maalik.
Culimadu aad bay u Amaaneen imaamka hadalo badana way ka sheegeen inshaAllah in yar unbaan ka soo qaadan doonaa si uusan u dheeraan qoraalku.
Imaam Shaafici wuxuu yiri haduu war kuu yimaado Maalik baa ah xidigii .Yacni qof ku qabsan kara hadalkaas ma jiro.
Yaxyaa bin saciid iyo Yaxyaa bin Maciin waxay yiraahdeen “Maalik waa amiirkii mu’miniinta ee xadiithka” Axmed bin Xanbal wuxuu yiri ” hadaad aragto qof u careysan Maalik ogoow in qofkaasi yahay bidcoole” sidoo kale Awzaaci wuxuu yiri ” Maalik waa Caalimkii Culimada iyo Caalimkii reer Madiina iyo Muftigii xaramaynka”. Imaam Maalik Waxaa lagu naanaysi jiray “Imaamu daarul hijrah” .
Waxaa caado u ahayd imaamka in hadii la waydiiyo su’aalo inuu inta badan oran jiray ma garanayo. Wuxuu ahaa midaan ku degdegin Fatwada, waxaa kaloo caado u ahayd markuu xadiithka akhrinayo inuu isa soo nadiifiyo cadar is mariyo isagoo weynaynaya xadiithka Rasuullka scw. Hadal ama odhaah waxaa jirta la odhan jiray oo ahayd ” Ma cid kalaa fatwoonaysa iyadoo uu Maalik Madiina joogo”!
Kutubtuu qoray imaamka qaar ka midda Waxaa ugu caansan kutubtiisa ” الموطأ” Imam Shaafici wuxu yiri isagoo ka waramaya kitaabkaan ma jiro kitaab ka saxsan Qur’aanka ka dib kitaabkan. Hadalkaasna wuxuu yiri intuusan soo shaac bixin kitaabka saxiixul Bukhaari iwm
Waxaa kaloo ka mida kutubtuu qoray imaamku
الرد على القدرية
كتاب النجوم والحساب مدار الزمن
رسالة في الأقضية، فيتفسير غريب القران
Wuxuu geeriyooday imaamku bishii Rabiical awal sanadkii 179hj, waxaana lagu aasay Madiinah qabuuraha Baqiic, kadib markii uu ku soo qaatay noloshiisii intii badnayd cilmi barasho ama dad barid ,sidoo kale zuhdi,dadaal iyoAlle ka cabsi .
Alxaafid Asuyuudi wuxu yiri wuu xanuunsaday Maalik wuxuna xanuunsanaa ilaa 22 cisho , wuxuuna dhintay maalin axad ah Bisha Rabiicul awalna tahay 10 ama 14. Xiligaaasna waxaa khilaafada hayay Haaruunu Rashiid. Waxaa ku tukaday jinaasadiisa dad aad u badan.
Allah u naxariisto Imaam maalik naxariis waasic ah, Siduu diinta Ilaahay ugu adeegay ee uu Sunadda Nabiga scw ugu gargaaray ,Ilaahay swt ha ugu abaal gudo janatul Firdawsa. Inagana Ilaahay hanaga dhigo kuwii ka faaideysta cilmigiisa << aamin.
WQ Najma Saciid
from → Imaam Maalik Ibnu Anas, Taariikhda Culimada Xadiith-ka
← Imaam Axmed Ibnu Xanbal
Imaam Abuu Daa’wuud →
Ahmed noor qorane permalink	May 17, 2012 11:18 am	Masha’allaah
Reply	Nuur Ibnuqorane AL SOMALI permalink	February 6, 2013 11:39 am	(ALLAAHU ~AKBAR